Shirkad farsamo sare leh oo ku hawlan kala saarista iyo nadiifinta nafaqooyinka dhirta dabiiciga ah
Sichuan Uniwell biotechnology co.,ltd waa shirkad farsamo sare leh oo ku takhasustay kala soocida iyo sifaynta nafaqooyinka khayraadka dhirta dabiiciga ah.Shirkaddu waxay xarunteedu tahay magaalada Qionglai, iyo laba saldhig oo wax soo saar ah oo ku yaal degmada Dongming ee gobolka Shandong iyo magaalada Qionglai ee Gobolka Sichuan.
Saldhigga wax-soo-saarku wuxuu ku raaxaysanayaa faa'iidooyinka kheyraadka ee deegaanka
Saldhigga wax-soo-saarku wuxuu ku raaxaysanayaa faa'iidooyinka kheyraadka ee deegaanka.Waxaan leenahay tiro ka mid ah ultrasonic joogto ah khadadka wax soo saarka counter-immika kaas oo leh awoodda geeddi-socodka sanadlaha ah ee 6,000 tan oo alaabta ceeriin ah.
Warshadayadu waxay leedahay aqoon-is-weydaarsi caadi ah oo nadiif ah kaas oo lagu rakibay qalab tijaabo ah oo casri ah.Waxa kale oo aanu haysanaa nidaamka xakamaynta tayada dhamaystiran kaas oo ka gudbay shahaadooyinka nidaamka tayada ISO9001.
Alaabadayada waxaa loo soo saaray si adag iyadoo la raacayo heerka GMP si loo hubiyo tayada sare ee alaabada habka oo dhan.Badeecadahayadu waxay heleen KOSHER, HALAL, SC, FDA, non-GMO iyo shahaadooyin kale oo caalami ah.
La kulan Kooxdayada Xirfadlayaasha
Shirkaddayadu waxay si xooggan diiradda u saartaa dhismaha kooxda farsamada.Waxaan had iyo jeer la kaashanaa khubaro badan oo ka socda Shiinaha iyo dalal kale.Waxaan sameynay habab wax soo saar oo aad u wanaagsan oo ka badan toban nooc oo badeecooyin ah, oo ay ku jiraan soosaar soybean ah, laga soosaaray cuspidatum polygonum, soosaar shaaha cagaaran, soosaaray Phellodendron, iyo soosaaray Ginkgo biloba, tusaale ahaan, wax soo saarka sanadlaha ah ee polygonum cuspidatum soosaarka ayaa gaadhay 100mt, iyo Wax soo saarka sanadlaha ee digirta soygu wuxuu gaaraa 50mt.
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo caafimaad wanaagsan
Shirkadeena waxaa ka go'an in ay soo saarto kheyraadka dhirta oo ay isku daydo in ay qaabeyso muuqaal wanaagsan oo shirkadeed.Waxaan rajeyneynaa in aan siino wax soo saarka dhirta saafiga ah oo tayo sare leh oo suuqa laga keeno adduunka iyo sidoo kale waxaan rajaynaynaa in aan ka qayb qaadano caafimaadka aadanaha.